Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Ross Barkley Child Story Plus Ihe Na-adịghị Ebube Eziokwu
Ihe omuma anyi Ross Barkley bu ihe omuma banyere ihe omuma banyere akuko nwata, akuko oge, ndi nne na nna, ezin’ulo, enyi nwanyi / nwunye, ndu onwe onye na ndu ya.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, anyị na -enye gị nyocha zuru oke nke ihe ndị ama ama malite na mmalite ya ruo mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Ee, ọ bụ ihe a maara nke ọma na onye ọkpọ egwuregwu bụ onye ọkpụkpọ ụkwụ abụọ nwere usoro magburu onwe ya. Agbanyeghị, ọtụtụ ihe amabeghị nke ọma gbasara ya dị n'akwụkwọ ndekọ akụkọ ndụ a. N'atụghị egwu ọzọ, ka anyị bido.
Ross Barkley Nwatakiri Akụkọ nke:
Ross Barkley mụrụ na 5th ụbọchị nke December 1993 na Liverpool, United Kingdom. Ọ bụ Sagittarius site na ịmụ nwa. Amụrụ nna nna Nigeria, Peter Effanga onye bụ injinia ụgbọala na nne Britain, Diane Barkley (onye na-elekọta ụlọ).
Otu n'ime foto mbụ nwata mara nke Ross Barkley.
Ross, kama ịza Effanga họọrọ ịza aha ada nne ya 'Barkley'n'ihi mmekọrịta siri ike ya na nna ya Nigeria nọ na-etolite.
Ross malitere ịkụ bọl n'ihi mgbalị nna ya mere bụ onye kwagara mba ọzọ, mere ka o kwe omume naanị onye nketa ya ịgba bọọlụ dịka ọrụ ya kacha baa uru.
Egwuregwu bọọlụ bidoro maka Ross Barkley:
Nke a bụ ihe metụtara ndị nne na nna kwagara na Europe. Ndị nne na nna nke Leroy Sane, Mesut Ozil, Christian Benteke wdg bụ ndị na -erite uru dị ukwuu.
Site na Peter Effanga nna ya, Ross sonyeere ya Everton bidoro gbaa bọọlụ mgbe ọ dị afọ 11. Ọ gara n’ihu site na Evertonian usoro ntorobịa.
Afọ Ross Barkley Early na Career Football:
N'ịhapụ ịkọ akụkọ dị ka afọ iri na ụma, Ross mara na ọ nwere homonụ na-eto eto na usoro ọmụmụ nke mere ka ọ too eto karịa ndị ọgbọ ya na ọbụna ndị mmegide dị ka foto dị n'okpuru.
Ross Barkley buru oke ibu nke mmadu gha eche na ya na-egwu egwu na udi adighi nma.
Romelu Lukaku na-ahụkwa otu ọrịa uto. N'ezie, mgbe ọ dị afọ 15, Ross na-esobu akụkụ ndị na-erughị afọ 18. Nke a bụ n'ihi oke ahụ ọ na-arụ.
Ross Barkley Biography - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
Ọtụtụ oge, o duuru ndị ntorobịa ya na nnukwu mmeri na imeri isi asọmpi dịka Echo Cup nke onye bụbu onye isi Liverpool gosipụtara. Rafa Benitez. Hụ onye duuru ndị ntorobịa ya na nnukwu mmeri.
A na-atụ anya na Barkley ga-eme Toffees mpụta ya na mbido mmalite nke oge 2010-2011 mana ọ na-egbu oge mgbe ọ merisịrị nnukwu mmerụ ahụ ụkwụ.
Ya na Liverpool amamihe dara mgbe ọ na-arụ ọrụ na England Under-19′s.
Na December 2011, n'oge na-adịghị anya mgbe ọ gbasịrị 18, o deere ọhụụ ọhụụ ọhụrụ na Everton. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ònye bụ Zoe Riozzi?… Nwunye Ross Barkley:
A ma ama Ross Barkley nke ọma n'amaghị ama, ihe bara uru, ezi uche, ezi na ọtụtụ enyi nwanyị na-edozi onwe ya, Wag na ekwuru na nwunye ga-abụ. Ọ bụghị onye ọzọ karịa Zoe Riozzi.
Ikekwe ị jụọla…, gịnị kpatara anyị ji too ya nke ukwuu?…. Ihe kpatara ya bu ihe ndia; Zoe Riozzi bụ onye dị ala. Anya ntutu ya dara ngwụrọ na-egosipụta ya niile.
Ọ hụrụ n'anya iyi jaket Parka dị mfe maka uwe ọrụ ya na akpụkpọ ụkwụ dị larịị karịa ikiri ụkwụ na-egbu egbu dịka ụfọdụ ndị nwunye na enyi nwanyị ga-eyi.
Ọ bụghị na ọ bụ nwanyị dị mfe?
Ọ bịara mara maka ụdị ndụ ọ na-ebi n'ụwa mgbe mbụ ọ malitere ịlụ Ross n'oge ọ dị afọ iri na ụma.
Ọ bụ ọrụ na nkwanye ùgwù maka idobe ụkwụ Barkley n'ala. O nwere ebe siri ike karịa nwoke England.
N'adịghị ka ọtụtụ WAGS football, Zoe enweghị mmasị na ihe ndị dịka ego na ama. N'ezie, ọ bụ onye nkuzi ụlọ akwụkwọ ọta akara 9 kwa elekere.
N'agbanyeghị na enyi ya nwoke nwere ihe ịga nke ọma na £ 40,000 kwa izu ụgwọ nke ga-ebili n'oge na-adịghị anya, Zoe ahọrọla ịkwọ ụgbọala kachasị egwu nke ụgbọ ala ga-ebugharị.
Kama Bentleys na Range Rovers ọtụtụ wags na-eji aga gburugburu, Miss Zoe Riozzi ahọrọla ịnọ n'azụ wiil nke Fiat 500 dị obi umeala.
Ọ na -anya ụgbọ ala Fiat500 dị ala nke na -efu naanị £ 4,000. Kedu ụdị ndụ dị mma maka nwunye onye nwere nde.
Ụzọ ndụ ya yiri nke Wayne RooneyNwunye, Coleen Rooney bụ onye a kwadoro maka idobe England na-aga n'ihu na-eleba anya.
Gị Zoe dị omimi karịa Coleen ma e jiri ya tụnyere ọdịdị ya. Di na nwunye a, ma otu afọ, si n'otu mpaghara Liverpool na ndị enyi na-ekwu na mmekọrịta ha dị 'na-agbasi ike'.
N'ezie, mmekọrịta ha esiwo n'ike gaa n'ike. Ndị enyi abụọ hụrụ n'anya ịga Buckingham Obí na Dubai. Otu ezumike ezumike na profaịlụ Twitter Zoe na-egosi ha n'akụkụ ọdọ mmiri na nkwụsịtụ anwụ. Ọ mara mma karịa ebe a.
Ross Barkley Ezigbo Ndụ:
Ee, dika o juru gi anya, nke a bu eziokwu. Ross Barkley bụ nke ụmụ amaala Nigeria.
Ọbụna nna nna ya bụ onye Nigeria.
dị nnọọ ka Dele Alli, Barkley jụrụ ajụ maka Nigeria. O ruru eru ighachitere Super Eagles tupu ya emee mpempe osooro ya maka ogige ndị isi na England na 2013.
Tupu mmalite ya megide Moldova na asọmpi World Cup, Ross kwuru otu oge na Nigeria bụ otu n'ime mba ndị ọ gaara anọchite anya na-abụghị England. Ma nna ya, Injinia Peter Effanga na nne ya, Diane Barkley ka bi na Liverpool.
Ross Barkley Eziokwu nke Onwe:
Ross bụ Sagittarius site na ịmụ nwa na ọ bụ mmadụ na oke oke ike ya na adịghị ike ya. O nwere àgwà na-esonụ maka àgwà zodiac ya.
Ike Ross Barkley: Ịba ụba, ezigbo mma na ịkpa ọchị.
Adịghị ike Ross Barkley: Nkwa ndị ọzọ kariri ike ịnapụta, enweghi ndidi, ga-ekwu ihe ọ bụla n'agbanyeghị agbanyeghị nchịkwa.
Ihe Ross Barkley nwere mmasị: Nnwere onwe, njem, nkà ihe ọmụma na ịdị n'èzí.
Ihe Ross Barkley achọghị: Ndị na-agba agba, na-eche echiche na mgbidi na mgbidi.
Ross Barkley Biography Eziokwu - Nnukwu Punch:
Ihe nkiri jọgburu onwe ya pụtara otu oge na-egosi na Ross Barkley na-akụ aka na brawl dị egwu. A pịrị ya aka n’akụkụ ihu tupu ya ada n’ala. Onye ọka iwu Barkley kwuru na ọ bụ onye ihe metụtara "Mwakpo na-enweghị isi nke onye bịara abịa bịakwutere ya".
Mwakpo ahụ mere na Santa Chupitos mmanya mmanya na Liverpool center center n'isi ụtụtụ nke ụtụtụ a. Ọ bịara nanị awa ole na ole mgbe ndị otu ya meriri Leicester City na 4-2 na Goodison Park.
Ross Barkley Biography - Onye na-emegide agbụrụ:
Mgbe ị dị ọcha, enwere onye nne na nna gị ma ọ bụ ndị nna ochie si Africa bụ mpụ?… Everton otu mgbe a machibidoro ya Sun na-edepụta ya site na ebe obibi ya banyere otu isiokwu banyere Ross Barkley na ndị nkatọ na-eche "Ịkpa ókè agbụrụ".
Onye na-ede akwụkwọ Kelvin MacKenzie tụnyere Barkley, onye nwere nna nna si Nigeria, na "Gorilla na zoo" ma kwuo na nanị ndị ọzọ nọ na Liverpool na ego ya bụ ndị na-ere ọgwụ ọjọọ.
Otu onye edemede dere ya n'otu agbụrụ.
E depụtara isiokwu ahụ "Nke a bụ ihe kpatara ha ji aga ape na Ross" tinyere foto nke Barkley na gorilla.
Mgbe ọ hụrụ akwụkwọ a, onyeisi obodo Liverpool Joe Anderson kọọrọ ya ndị uweojii na Independent Press Standards Organization onye kpọrọ ya "Ịkpa ókè agbụrụ na iwe". Onye mgbasa ozi Sun bụ News UK kwuru na nkwupụta na MacKenzie "Amachibidoro ya ozugbo".
Ross Barkley Bio - Chelsea Na-achị:
Ross kesara mgbazigharị na Stamford Bridge mgbe ọ na-eme ọhụụ U-ya na njedebe ụbọchị iji kwusi ihe mebiri emebi maka Chelsea FC.
Antonio Conte weghachite na Ross Barkley kpebiri imeghari njem na Chelsea mgbe a gwara ya na mba England amapuwo ihe ndi ozo n'ihi na ya enweghi ike iru Antonio Conte na ekwentị.
Akụkọ na-ekwu Antonio Conte si agbanyụrụ ekwentị ya ma ọ bụ nye ya ndụmọdụ ka ọ ghara ịgwa onye gbara afọ 23 ahụ okwu. Mgbe akụkọ gọrọ agọ na nke ahụ bụ ikpe, ọ na-achọ aghụghọ aghụghọ na Barkley maka ịbanye. N'okwu ya…
'Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ọ bụla nwere nnukwu mmasị igwu egwu maka nnukwu ụlọ, ọ na-egosi. Mgbe ụfọdụ ọ dị mkpa ka onye njikwa gwa onye ọkpụkpọ okwu tupu ya abịanye aka. Oge ndị ọzọ ọ bụghị. Abanyela m ọtụtụ ndị egwuregwu n’agwaghị ha agwa. ”
Ross Barkley Biography - Wikipedia
Aha n'uju Ross Barkley
aha otutu Ross onye isi
Ụbọchị ọmụmụ Daybọchị nke ise nke Disemba 5
Ebe amụrụ onye Liverpool, United Kingdom
Egwuregwu N’agbata etiti
Nna Peter Effanga
nne Diane Barkley
enyi nwanyị Zoe Riozzi
Ogo & Ibu ibu 6 ′ 1 ″, 87kg
Daalụ maka ịgụ ihe mmụta ederede anyị na akụkọ Ross Barkley. Na Ndụ ndụ, anyị na -elekwasị anya na nnyefe Akụkọ ndụ ndị egwuregwu bọọlụ Bekee na izi ezi na izi ezi. Ị nabatara ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụ jiri igbe nkọwa wee kọọ ihe ọ bụla dị mma n'isiokwu a.